विवाहित मान्छे संग सम्बन्ध - मनोविज्ञान
एक विवाहित पुरुष संग सम्बन्ध को मनोवैज्ञानिक धेरै को लागी दिलचस्प हुन्छ, विशेष गरी यस समयमा जब तपाईं आफु को भाग को विचार संग threshold मा खोज्नुहोस। यस्तो सम्बन्ध सधैं सान्दर्भिक हुनेछ, साथै आज, जब विवाहित पुरुषहरु संग रोमान्स कमजोर सेक्स को सुन्दर प्रतिनिधिहरुलाई आकर्षित गर्दछ। सेक्सविज्ञहरूका अनुसार, तपाईं स्त्रीहरूको दुई समूहमा विभाजन गर्न सक्नुहुन्छ जुन विवाहित पुरुषसँग रोमान्स मनपर्छ।
पहिलो समूहले आशा गर्दछ कि यो पुरुष बाहिर परिवार बाहिर लैजान र उनको पत्नी बन्न सक्दछ। यस्ता महिलाहरू धैर्य छन् र मायालु व्यक्तिको प्रत्याशित सम्बन्धमा सम्बन्ध विकास गर्न सक्षम छन्।
दोस्रो समूहको महिलाहरु विवाहित गर्न चाहँदैनन्। तिनीहरू बिना बाध्यता सम्बन्धहरूसँग पूर्णतया सन्तुष्ट छन्, तिनीहरूसँग परिवार प्राप्त गर्ने इच्छा छैन।
विवाहित मानिससित सम्बन्ध कसरी राम्ररी ठीक गर्ने?
धेरै समय पछि महिलाहरु एक विवाहित पुरुष संग एक सम्बन्ध तोड्न कसरी आश्चर्य छ। यो सही तरिकाले गर्न, यो बाहिरको अवस्थालाई हेर्न आवश्यक छ, बुझ्न यो दुखाइको परिवारले कस्तो दुखाइ महसुस गर्छ, उसको श्रीमतीको अनुभव कस्तो लाग्छ। यो बुझ्नको लागि, तपाई भर्खरै विवाहित पुरुषको पत्नीलाई परिचय दिन आवश्यक छ।
तपाईं कल्पना प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र भविष्यको भविष्य कल्पना गर्न सक्नुहुनेछ जुन यो व्यक्तिसँग भेटिन्छ। उदाहरणका लागि, तिनले आफ्नो परिवार छोडे र फेरि विवाह गरे। के तपाईं उसलाई भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ? यदि उनले आफ्नी श्रीमतीलाई धोका दिए भने, त्यहाँ कुनै ग्यारेन्टी छैन कि उसले यसलाई फेरि गर्न चाहँदैन।
तपाईं एक अधिक भयानक स्थिति पनि कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। सायद यो मान्छेसँग एक मालकिन छैन, तर धेरै। उहाँले धेरै महिलाहरूलाई एउटै सुन्दर शब्दहरू बोल्नुहुन्छ, प्रेम र विश्वासीमा पनि आत्मीय हुन्छ। त्यहाँ धेरै त्यस्ता घटनाहरू छन्।
एक उत्कृष्ट तरीका कसरी एक विवाहित पुरुष संग एक सम्बन्ध को बाहिर निकालन को लागि उनको सम्बन्ध संग एक नोटबुक मा एक सानो वर्तनी हो, पछि यो यसलाई फेरि पढ्न आवश्यक छ, प्रस्तुत गर्नाले यो अर्को महिलाको सन्देश हो जसले मद्दत पुर्याउँछ। यदि त्यहाँ एक विचार हो कि यो अवस्था बाहिरबाट हास्यास्पद देखिन्छ, यो विचार गर्नु आवश्यक छ कि विवाहित मानिससँगको सम्बन्ध आवश्यक छ।
बरु निर्माण गर्न कुनै आवश्यक पर्दैन, किनकि विवादास्पद व्यक्तिका शब्दहरू कति सुन्दर हुन्छन्, यो उचित छ कि साँच्चै मायालु व्यक्ति हरेक राती हरेक रात अर्को महिला संग कसरी जान्छ। और यदि विवाहित पुरुषहरु आफ्नो पत्नियों संग आफ्नो सम्बन्ध जारी नहीं गर्न चाहते हो, तब उनि किन तलाक को लागि दायर नहीं गरेको छ? यो प्रश्नको जवाफ दिन सजिलो छ। कुरा यो हो कि तिनीहरू धेरै सहज हुन्छन्, किनकि तिनीहरू सँगै हेरविचार, स्नेह र आन्तरिक सम्बन्ध प्राप्त गर्छन्।
मानिसलाई गम्भीर सम्बन्धको लागि कसरी पत्ता लगाउनुहुन्छ?
पूर्व केटालाई कसरी फर्काउन, यदि त्यो एक प्रेमिका छ?
तपाईंलाई एक मानिस मनपर्ने लक्षणहरू
पुरुषहरूको बारेमा दिलचस्प तथ्यहरू
पतिले घृणित र अपमान गर्छन् - के गर्ने?
यदि एक व्यक्ति मनपर्दैन र जाने छैन?
आँखाको रंग अनुकूलता
केटालाई कसरी बदला लिनु हुन्छ?
पत्नी र पतिको पारिवारिक सम्बन्धको मनोविज्ञान
टुक्रा टुक्रा तल्ला टाइल
कसरी उनको पति संग भाग लिन्छ?
कसरी आफ्नै हातमा स्लाइडरहरू सिलाई गर्ने?
एक हप्ताको लागि सब्जी आहार
महिलाहरु मा ट्रिचोमोनियसिस
बालीमा के देख्नुहुन्छ?
प्लास्टरबोर्डको आर्क कसरी गर्ने?
कसरी वजन घटाने को लागी अदरक बेंच कसरि?
सानो आंतन को लक्षण - लक्षण, उपचार
साल्मोनेला - लक्षण
सबैभन्दा ठूलो छोरा क्रिस्टियानो रोनाल्डो उनको बुबाको पछि लागी एक मोडेल बनेको थियो
बच्चाहरु मा ओबामाको उपचार
बवासीर भनेको के हो, र कसरी सबै प्रकारका रोगहरूको उपचार गर्ने?
17 अतिरिक्त, उनि के गर्दैछन् भन्ने कुरालाई थाहा छैन
मेकेरेलले सब्जका साथ ओवनमा पकायो
गर्भवती गर्भावस्था प्रारम्भिक चरणमा - कारणहरू
चमडा डाउन जैकेट - स्टाइलिश महिलाको सिजन मोडेल
इट्रो स्प्रिंग-गर्मी 2013
राई आटाबाट काभ्रे